प्रदेश-४ – Page 31 – Halkaro
विकासका लागि प्रमुख दलले हलो अड्काएः डा. भट्टरार्इ
गोरखा, पुस ३ । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रमुख दलहरूले देशको सम्वृद्धिमा हलो अड्काएको अारोप लगाएका छन् । अहिलेको संविधान संशोधन हुनुपर्ने भन्दै संयोजक भट्टरार्इले प्रमख दलहरू संशोधनमा ढिलाइ गर्दै देशको अार्थिक विकासका लागि बाधक बनेको उनले बताए । नयाँ शक्ति बिद्यार्थी युनियनले गोरखा क्याम्पसमा आयोजना गरेको ‘बिद्यार्थीसँग बाबुराम’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले […]
नवलपरासीमा फेरी अर्को पुल भाँचियो, ठूला सवारीसाधन अवरूद्ध
नवलपरासी, मंसिर २६ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको दलदलेमा रहेको बौलाहा खोलाको पुलमा भाँचिँदा पर्वपश्चिम राजमार्ग अवरूद्ध भएको छ । विहान पूर्वबाट पश्चिमतर्फ गुडिरहेको ना६ख ३०१७ नंको ट्रकले पुललाई ठक्कर दिँदा पुल भाँचिकएको हो । पुल भाँचिएपछि यात्रुबाहक बस र मालबाहक ट्रक अलपत्र बनेका छन् । साना हल्का सवारी साधन भने पुल भाँचिएको भागभन्दा अर्को भागबाट […]
विद्यार्थीको कार्यक्रममा डा. भट्टरार्इलार्इ जुत्ता प्रहार
प्रकाशित मिति : २०७३, २३ मंसिर बिहीबार December 9, 2016
कास्की, मंसिर २३ । नयाँ शक्ति नेपालको विद्यार्थी संगठन नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनको कार्यक्रममा पोखार पुगेका पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टरार्इलार्इ लक्षित गरी एक विद्यार्थीले जुत्ता हानेका छन् । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनले नवआगन्तुक विद्यार्थीको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा भट्टरार्इ माथि कैलालीका सञ्जिब भट्टरार्इले जुत्ता हानेका हुन् । स्नातोकत्तर तहमा अर्थशास्त्र पढिरहेका […]
संविधान संशोधन होइन कार्यान्वयन गरौँ: एमाले नेता खनाल
प्रकाशित मिति : २०७३, २० मंसिर सोमबार
कास्की, मंसिर २० । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधान संशोधनभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेता खनालले संविधान संशोधन भन्दा कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य दायित्व भएको बताए । पोखरमा सोमबार अायोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता खनालले संविधान संशोधनतिर लागे भने देशमा तनाव उत्पन्न हुने र विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने दाबी गरे । त्यसैले पनि […]
म्याग्दीको दानामा २२० केभी क्षमताको विद्युत सवस्टेसन निर्माण हुँदै
प्रकाशित मिति : २०७३, १९ मंसिर आईतवार
म्याग्दी, मंसिर १९ । म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र र मुस्ताङमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उद्देश्यले सवस्टेसन निर्माण सुरु भएको छ । जिल्लाको दानामा २२० केभी क्षमताको विद्युत् सवस्टेसन निर्माण कार्य सुरु भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाले जनाएको छ । सवस्टेसन निर्माणका लागि ठेकेदार कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएर […]
बूढीगण्डकी आयोजना मुआब्जा विवादः प्रहरी र स्थानीयबीच झडप
गोरखा, मंसिर १६ । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्यालयमा तालबन्दी गर्न गएका स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीबीच झडप भएको छ । गोरखाको घ्याल्चोकस्थित सिउरेनीटारमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालयमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले ताला लगाउन पुग्दा प्रहरीले अवरोध गरे पछि झडप भएको हो । बूढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिको आह्वानमा बिहानैदेखि स्थानीय बासिन्दा सिउरेनीटार पुगेका थिए । उनीहरूले दिउसो […]
पर्वतमा उन्नाइस व्यक्ति एचआइभी सङ्क्रमित
प्रकाशित मिति : २०७३, १४ मंसिर मंगलवार
पर्वत, मंसिर १४ । जिल्लामा १९ जनामा एचआइभी/एड्सको संक्रमण देखिएको छ । तीमध्ये सातजना पुरुष, आठजना महिलामा यसको संक्रमण देखिएको हो । त्यस्तै तीन बालबालिकामा पनि यसको संक्रमण देखिएको छ । जिल्ला अस्पताल पर्वतले यही साउनदेखि तथ्याङ्क सङ्कलन अभियान सुरु गरेको छ । सङ्क्रमित रोगीले अहिले निरन्तर निःशुल्क औषधि सेवन गरिरहेका छन् । जिल्लामा सबैभन्दा […]
जिप दुर्घटनामा दुईको ज्यान गयो
म्याग्दी, मंसिर ११ । जिल्ला सदरमुकाम बेनीबाट भकिम्ली जाँदै गरेको जिप दुर्घटना हुँदा दुर्इ जनाको ज्यान गएको छ । ग २ च २००६ नंको जिप आज साँझ भकिम्ली गाविस–८ हल्लेगौँडामा दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा सातजना घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । दुर्घटनामा परी भकिम्लीका ६० वर्षीय गङ्गामणि छन्त्याल र बागलुङ लेखानी […]